Patrick Cockburn“Mareykanka waxa uu luminayaa awoodda militari iyo mid dhaqaale sababo la xiriira COVID-19”. - Awdinle Online
Patrick Cockburn“Mareykanka waxa uu luminayaa awoodda militari iyo mid dhaqaale sababo la xiriira COVID-19”.
March 28, 2020 (Awdinle Online) –Maqaal uu qoray Patrick Cockburn oo kamid ah qoraayaasha The Independent, Mareykanka ayaa salka uga degaya xaalad u muuqa quus iyo niyad jab sabab uu u noqday Caabuqa Coronavirus, kadib muddo dheer oo Xukuumadda Washintong hoggaanka u heysay awoodda sare ee maamulada dhaqaalaha iyo Militariga.
Mareykanka waxa uu xoog iyo xeylad isugu geeyay sare u qaadista dhaqaalaha iyo militariga, waxaana uu u arkay in ay tahay qorshaha kaliya lagu maamuli kalo dalal iyo Qaaradaha kala duwan ee Caalamka, balse Maamulka Trump waxa uu xakameyn waayay Coronavirus oo iskaba dhaaf in uu dalal kale gacansiiyo uu Mareykanka u caal-heli la’ayahay wax ka qabashadiisa.
Qoraaga sheekadaan ayaa yiri “Qalalaasihii Gacanta Suez ee 1956-dii iyo faragelintii Mareykanka Midowgii Soviet ee Afghanistaan 1980-yadii, waxa uu Mareykanka ku noqday dal awood buuxda leh, balse waxaa himilooyinkaas dhulka la galaya COVID-19 oo aan jirin xeelad uu wax kaga qabto ama ugu yaraan usoo jeediyo talooyin wax looga qabto”.
Wuxuu intaas ku daray in dhibaatada Corona ay leedahay saameyn aad u weyn sababta oo ah qofkasta oo nool ayaa ka walwalsan, waxaana dhibbane u ah dadka uu gaaray ehelkooda iyo dalalkooda.
Maamulka Madaxweyne Trump ma lahan awood muuqata iyo mid dadban oo ay wax kaga qabanayaan COVID-19 oo xaqiiqdii ah Musiibo gaartay Qaaradaha kala duwan ee Adduunka.
Patrick Cockburn oo ah qoraaga Warbixintaan waxa uu isbar-bardhig ku sameeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ah labo dal oo tartan iyo xifaaltan xooggan uu ka dhaxeeyo, haba ugu weynaado dhanka dhaqaalaha, isaga oo ka eegay sida ay Dowladahaan ula dagaalameen COVID-19.
Patrick waxa uu sheegay in Xukuumadda Beijing ay ku guuleysatay ciribtirka Caabuqa Coronavirus oo kasoo bilawday Magaalada Wuhan ee Gobolka Hubei, dadaalada aan kala go’a lahayn ee Shiinaha uu la garab taagan yahay dalalka la dhibaatoonaya Cudurka iyo doorka aan muuqan ee Mareykanka.
“Shiinaha waxa uu dalkiisa ka dabargooyay COVID-19 oo uu kasoo aas-aasmay, intaa ugama uusan harin ee waxa uu garab istaag u muujiyay Italy, Belgium, Wadamada Afrika iyo Xitaa Mareykanka, taasi soo nama tuseyso awoodda liidata Mareykanka?” ayuu yiri Patrick Cockburn.
Patrick Cockburn oo kamid ah qoraayaasha The Independent ee Ingiriiska laga leeyahay waxa uu soo bandhigay lacagaha Mareykanka uu ku qarash-gareeyo askarta kaga sugan dalal kala duwan iyo dhaqaalaha ku baxa.
“Mareykanka waxa uu saldhigyo Militari oo dhan 800 ku leeyahay adduunka oo dhan, waxaana Xukuumadda Washington ku bixisaa lacag dhan 750 Bilyan oo Doollar, ujeedka laga leeyahay waa in lagu muujiyaa awoodda Mareykanka, waxaana hamigiisa ugu weyn uu yahay in uu muujiyo awoodda uu ku leedayahay dagaalada ka socda Dalalka Soomaaliya, Afghanistan iyo Ciraaq” ayuu Maqaalka ku yiri Patrick Cockburn.
Dib u soo nooleynta Xaqiiqooyinka:
Mareykanka waxa uu faraha kula jiraa maareynta Ganacsiga iyo dhismaha awoodda Militariga, balse marnaba liiska kuma uusan darsan kiisaas, Madaxweyne Trump waqti badan kuma uusan bixin la dagaalanka COVID-19.
Shiinaha waxa uu taageero badan ku heli doonaa dadaalka ka dhanka ah Caabuqa Coronavirus ee uu sameeyay, halka Mareykanka uu waqti iyo dhaqaale kale uu gelinayo Ganacsiga iyo Militariga oo diiradda u saaran.
Dhibaatada ugu weyn ee heysata Mareykanka ee sababtay in uu gacanta ka taago wax ka qabashada COVID-19 ayaa ah in Donald Trump uu kala qaybiyay siyaasadda iyo aragtida bulshada Mareykanka, Darbiga Xadka Mexico oo lacago xad dhaaf ah ku kacaya.
“Shiinaha haddii uu ku guuleystay wax ka qabashada caabuqa dalkiisa kasoo bilawday, dabcan niyad wanaagsan ayay u leeyihiin dadka Mareykanka oo madaxdooda iyo siyaasiyiintaba ay u sheegaan in ay dhan waliba kaga horeeyaan, waxa muuqda waa Taageerada sii kordhaya Shiinaha iyo awood dhaca Mareykanka oo xitaa ay ka niyad jabayaan dadka u dhashay dalkaas” ayuu qoraalkiisa ku yiri Patrick Cockburn oo warbixintaan ku qoray Indepedent.
Shiinaha kama uusan gamban halka uu ku tuhmayo in uu kaga yimid Coronavirus, waxaana 13-kii bishaan maarso Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian uu sheegay in Wuhan uusan ka Tarmin Coronavirus ee balse Mareykanka uu ku tallaalay.
Haddaba ma isleedahay Mareykanka waxaa hoggaanka u qabanayo Shiinaha, marka la eego isu milanka Siyaasadda, Dhaqaalaha, Militariga, kahor tagga cudurada faafa iyo ciribtirkiisaba, iyada oo laga tusaale qaadanayo COVID-19.
Previous articleBaarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed oo yeeshay kalfadhigoodii uga horeeyay
Next articleHoggaanka Al-Shabaab Oo Khilaaf Xoog Leh Soo Kala Dhexgalay